PSG: Joojinta dib u socota? Ka jawaab Jimce Mbappé, mar dambe Neymar - TELES RELAY
ACCUEIL » International • UNES • DIB U EEGID • DIB U EEGID AFRICAN PRESS • SPORTS PSG: Joojinta dib u socota? Ka jawaab Jimce ee Mbappé, ka dibna Neymar
PSG: Joojinta dib u socota? Ka jawaab Jimce ee Mbappé, ka dibna Neymar
Default Website 5 May 2019
Guddiga anshaxa ee FFF ayaa ku dhawaaqi doona jimcaha go'aankeeda Kylian Mbappé (la macaamil dadka ka soo horjeeda) iyo kaddibna Neymar (ujeedada qosolka ah ee loo yaqaan daawo-dacaayad-bixiye), ayaa la ogaaday khamiistii ilaha dhow ee faylka, oo xaqiijinaya macluumaadka L'Equipe.
Daqiiqado ka dib ayaa labada kooxood ee PSG ay ku guul darreysteen inay ku guuleystaan ​​finalka Coupe de France, mas'uuliyadda xiriirka kubadda cagta Faransiiska. Mbappé ayaa waxaa laga saaray ciyaarta dheeriga ah ee uu ku maqnaa ee daafaca Rennes Damien Da Silva, kaasoo ciyaarta ku dhameystay. Xiddigaha adduunka ee 20 ayaa halis ugu jira ugu yaraan seddex kulan oo ganaax ah (wuxuu mar hore u adeegay).
Neymar ayaa sii xoogeysanaya
Neymar, kiisku waa mid aad u adag. Wax walba oo isbedelay sida Braziliyaanka ayaa u dabaaldegay garoonka Stade de France si uu u helo koobkii finalka. "Haa, tag inaad barato kubadda cagta, adigaa!" Kadibna wuxuu soo bandhigay daawadayaal, kaasoo Neymar ka jawaabay hal mar - iyada oo aan xooga badan - wajiga.
Portugal: Aboubakar Vincent ayaa ka soo laabtay meel fog
Premier League: Lacazette ayaa loo doortay ciyaaryahan xilli ciyaareedka ah taageerayaasha Arsenal